LG ၏အောင်မြင်သောလိုင်းဖြစ်သော LG Chocolate | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | LG, မိုဘိုင်း, NOTICIAS
ဖက်ရှင်လောကမှာအမြဲတမ်းသိသာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအကြောင်းအမြဲတမ်းပြောနေတတ်တယ်၊ ဘာမှမရှိဘူးစတိုင်တော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ် အရာအားလုံးပြန်လည်ရောက်ရှိ။ လက်မှတ်မှာ LG အတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါပုံရသည် တကယ့်အောင်မြင်မှုရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ LG ရဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ 2.005 တစ်နှစ်လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အစွန်းရောက်ဗေဒပြောင်းလဲမှု ၁၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် terminal တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည် LG က KG800 ချောကလက်.
ထိုခေတ်ကာလ၏ကိရိယာတစ်ခုသည်အချိန်ကုန်လွန်စွာကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကို“ စပျစ်သီးဆွတ်ခြင်း” မဖြစ်စေဘဲအဘယ်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောထားသည် အဆင့်မြင့် ဘာလဲ ၎င်း၏အချိန်။ ဒီစျေးကွက်ထဲရှိကုန်ပစ္စည်းနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုတင်ပို့ခြင်း၏ဤအယူအဆကို အခြေခံ၍ LG သည်ချောကလက်ကို 2.020 ကနေမော်ဒယ်အသစ်.
မကြာမီ LG Chocolate 2020 ကိုတွေ့ရတော့မည်
စမတ်ဖုန်းများ၏နည်းပညာနှင့်အင်္ဂါရပ်များသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ တယ်လီဖုန်းများ အရွယ်အစားအများကြီးစိုက်ပျိုးကြသည်, ထုတ်လုပ်သူအားလုံးအလုပ်လုပ်သော "စံ" ဖုန်းအယူအဆတစ်ခုရှိသည်။ ထိုသူတို့လည်းရှိသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တူညီသောအတိုင်းအတာဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Motorola မကြာသေးမီကမှကယ်တင်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသိမ်းဆည်းထားသောပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည့် shell-type စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပြန်လာခြင်းကအခြားကုမ္ပဏီများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတိတ်အကြောင်းတစေ့တစောင်း။
ကတူပုံရသည် LG မှာသူတို့သီးသန့်အမှတ်ကိုပြန်ရချင်ကြတယ် သူတို့ချောကလက်လိုင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့သူတို့ရရှိခဲ့တာပေါ့ ကုမ္ပဏီအတွက်ထင်ရှားတဲ့စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ LG Chocolate KG800 က လျှောပုံစံအသစ်မဟုတ်သော်လည်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ ကျနော်တို့အချို့တွေ့ရှိခဲ့သောအတွက် rounded အနားနှင့်အတူ Frameless ခန္ဓာကိုယ် ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများ အရမ်းအဆင်ပြေ။ ၏ကင်မရာ ၁၂ megapixels၊ ကစားသမား mp3, 2G GPRS ဆက်သွယ်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်သည်၎င်းကိုယခုအချိန်တွင်နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောက်ပါ « G » nomenclature ကိုစွန့်လွှတ် သင်၏ကိရိယာများအတွက်သင်မျှော်လင့်နေပါသည် ၎င်း၏ချောကလက်ထုတ်ကုန်များ၏အသစ်သောလိုင်း။ နေဆဲအရာတခုတခုအပေါ်မှာ updated ဗားရှင်း နည်းနည်းကသူ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်။ လူသိများသည် နှင့်ပုံစံ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူကအပေါ်မှီခိုနိုင်ဘူး 6,5 လက်မထက်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်, ချစ်ပ် Snapdragon 765G၊ ကင်မရာ, ဘက်ထရီ 4.000 mAh ဘက်ထရီ နှင့်ဆက်သွယ်မှု 5G။ ထိုအကအားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနှင့်အတူ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးပရိသတ်ကိုသည်။ LG Chocolate အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ထားပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG သည်၎င်း၏အောင်မြင်သော LG Chocolate line ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
TikTok သည် coronavirus မှတွန်းအား ၁ ဘီလီယံကျော်လွန်သည်